Nipoitra ny tantaram-pifandraisan’ny governemanta sy ireo lehiben’ny jiolahy ao Trinité sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Mifototra amin'ny fanadihadian'ny polisy momba izany ny tatitra an-gazety
Voadika ny 19 Aogositra 2019 5:33 GMT
Lapan'ny Tanàna Port of Spain, ny foibe Fiadidiana ny Tanàndehiben'i Port of Spain, iray amin'ireo masoivohom-panjakana voatanisa tao anatin'ilay voalaza fa fanomezana fifanaraham-panjakana tamin'ireo lehiben'ny jiolahy. Sary nahazoana alalana.
Tamin'ny 16 Jolay 2019, namoaka tatitra fanadihadiana ny gazety Guardian ao Trinité sy Tobago izay nanambara fa nanome fifanarahana ho an'ireo lehiben'ny jiolahy miisa fito izay mitentina efa ho 6 tapitrisa dolara TT na 890.000 dolara amerikana ny governemanta. Mifototra amin'ny tsikaritra navoakan'ny sampan-draharaha manokana an'ny polisy ao Trinité sy Tobago ny tatitra .
Manondro ireo mpitarika andian-jiolahy amin'ny solon'anarana na fanombohan'anarana toy ny “Doggy” sy “SR”, avoakan'ny lahatsoratra amin'ny antsipiriany ny hoe iza no nandray fifanekena momba ny asa fanorenana, ohatrinona ny tombam-bidiny ary iza ny biraon'ny governemanta namoaka izany. Mikasika ny asa fanamboaran-dàlana sy ny fanamboarana lakan-drano any amin'ireo tanàna manodidina misy ireo jiolahy avy ny ankamaroan'ny fifanarahana izay mitentina 200.000 dolara TT mahery na $ 297.000 dolara amerikana, miampy sarany hafa any aoriana ny ankamaroany. Manasongadina ny fifandraisana misy eo amin'ny Fiadidian'ny Tanàndehiben'i Port of Spain sy ny lehiben'ny jiolahy izay iray amin'ireo malaza ratsy indrindra ao amin'ny firenena, Tanànan'ny Rasta ny ampahany tamin'ny tatitra. Nanomboka tamin'ny taona 2015 ny fifanarahana nomena azy ireo ary mitentina 600.000 dolara TT mahery na 88.872 dolara Amerikana.
Tsy vao voalohany izao no nivoaka ny fametraham-panontaniana momba ny fifandraisan'ny governemanta amin'ireo fikambanan-jiolahy.
Ny 29 Jona 2017, rehefa nanao fianianana ho Minisitry ny Fotodrafitrasam-bahoaka vaovao i Marlene McDonald, dia efa nanomboka nanao fanadihadiana momba azy ny Komitin'ny Fahamarinana ao amin'ny firenena noho ny voalaza fa fananganany — niaraka tamin'ny vadiny — fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana hosoka mba hahazoana volam-panjakana. Vao mainka nanampy trotraka ny fanotronan'ny vadiny sy “lehiben'ny vondrom-piarahamonina” — teny malefaka izay matetika ampiasaina hanondroana ireo lehiben'ny jiolahy ao Trinité sy Tobago — ny lanonana tamin'ny fianianana nataon'i McDonald. Noroahina izy telo andro taorian'izay .
Ity anefa no voalohany, na izany aza, nanamafisan'ny tatitra nataon'ny polisy momba ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ny jiolahy ao an-toerana. Araka ny mpitandro ny filaminana, nitarika ny fitomboan'ny herisetra tamin'ireo faritra manodidina izay hanaovan'ireo jiolahy ny asany ny fanambarana. Naneho hevitra momba ity olana ity ny Kaomiseran'ny Polisy, Gary Griffith, nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanora-gazety taorian'ny namoahan'ny Guardian ny fanadihadiana, izay nanamafy fa ny ady ny teo amin'ny andian-jiolahy roa tamin'iny herinandro iny dia fifandirana hahazoana fifanarahana tamin'ny governemanta mba hanamboarana fantsona fandehanan-drano ao amin'ny faritra.
Tsy vao izao i Griffith no nanao fanambarana. Efa-bolana nandraisany ny andraikitra, tamin'ny volana Janoary 2019, nilaza izy tao amin'ny antsafa tao amin'ny fahitalavitra CNC3 fa hiady amin'ny andian-jiolahy, tokony hatsahatra ny famoahana fifanaraham-panjakana ao amin'ny firenena hoy izy. Tamin'izay fotoana izay, nanomana paikady niaraka tamin'ny manampahefana izy mba hamahana ny olana.
Nanambara i Griffith tato anatin'ny herinandro vitsy fa ny fifanarahana natao niaraka tamin'ireo lehiben'ny jiolahy no vao mainka nanasarotra kokoa ny asan'ny polisy. Nolazainy fa ny fifanarahana amin'ny fanjakana — amin'ny sampandraharaham-panjakana isankarazany — no iray amin'ny antony lehibe indrindra mahatonga ny kolontsain-jiolahy ao amin'ny firenena hirongatra tao anatin'ny 15 taona.
Nahatonga korontana ny resabe momba ny fifanaraham-panjakana niaraka tamin'ireo fantatra fa fikambanan-jiolahy. Ireo sampan-draharaha toy ny Fiadidian'ny Tanàndehiben'ny Port of Spain sy ny Fari-piadidiana Diego Martin no voatonona anarana tamin'ny fanomezana ireo fifanarahana ireo, na dia nilaza aza ireo solombavambahoaka tao amin'ireo distrika ireo fa tsy nahalala izany .
Tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanora-gazety ny 19 Jolay, nilaza ny Praiminisitra Keith Rowley fa miara-miasa amin'ny polisy ny governemanta mba hahazoana ny hay rehetra ilaina hanenjehana ireo andian-jiolahy amin'ny alàlan'ny Lalàna miady amin'ny Asan-jiolahy nolanian'ny sampan-draharaha vao haingana, izay manameloka ny asan'andian-jiolahy. Nohazavainy anefa fa ny fanangonana porofo sy ny fiampangana ireo andian-jiolahy ihany no asan'ny polisy.
Namaly ny Praiminisitra i Griffith taty aoriana ary nilaza hoe, “Tsy hoe fahananareo akory ny fahavalo dia avy eo milaza amin'ny mpitandro ny filaminana ianareo mba hanenjika ny fahavalo”.
Samy nilaza ny Praiminisitra sy ny kabinetrany fa ny lalàna no hamahana ny olana. Hatramin'ny nivoahan'ny tatitra, nilaza i Kazim Hosein, Minisitry ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra sy ny Governemanta eo An-toerana fa hisy ny fanadihadiana lalina ny kaonty tafiditra amin'ity toe-draharaha ity.